नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त – www.agnijwala.com
काठमाडौं । सरकारले ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपरान्ह बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीको नयाँप्रहरी महानिरीक्षकमा डीआईजी ठाकुर ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो ।
हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षकका रुपमा उनी प्रदेश नं.१ प्रहरी प्रमुखका रुपमा कार्यरत् थिए । प्रहरी महानिरीक्षकबाट सर्वेन्द्र खनालले अवकाश पाउने भएपछि सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्तिको निर्णय गरेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ज्ञवालीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण हालका आईजीपी खनालसहित तीन एआईजी र उनका ब्याचका डीआईजीहरुले सेवाहदका कारण अवकाश पाउँदैछन् । बढुवासँगै प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका ज्ञवाली नेपाल प्रहरीको २७ औं आईजीपी बनेका हुन्। आईजीपीको दौडमा दुई डीआईजी तारिणीप्रसाद लम्साल र सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि थिए। उनीहरु पनि ज्ञवालीसँगै सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्।
२०४७ साल असार २५ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका ज्ञवाली विद्यमान ३० वर्षे सेवाअवधि कायमै रहे पाँच महिना प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा रहने छन्।
आज बिहानै तीन संक्रमितको मृत्यु
नेपालीको इमिनीटि पावर धेरै : कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेभन्दा निको हुने १ सय १२ गुणा बढी
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अयोध्याधामका लागि छुट्याइयो एक सय विघा जग्गा
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै : सरकारलाई छैन चासो
उपराष्ट्रपतिलाई कोरोना संक्रमण
किन रोकियो ओली-प्रचण्ड भेटघाट ?
युनाइटेड फाइनान्सद्धारा सुनिश्चित भविष्य मुद्धती निक्षेप योजना सार्वजनिक, यस्ता छन् सुविधाहरु